प्रचण्डको त भाग्य नै बलियो, फेरि आयो अर्को खुसीको खबर ! – GALAXY
प्रचण्डको त भाग्य नै बलियो, फेरि आयो अर्को खुसीको खबर !
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको माओवादीलाई देशकै १ नम्बर पार्टी बनाउने भन्दैं भाषण गरेयता माओवादी प्रवेश गर्नेको ठूलो लहर लागेको छ ।
यसैबीच, अर्को खुसीको खबर आएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका नगर तथा क्षेत्रीय अध्यक्ष नै पार्टी परित्याग गरी माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन् । रौतहटस्थित क्षेत्र ३ का पार्टी अध्यक्ष रामाकान्त चौरसिया, कटहरिया नगर अध्यक्ष दुर्गा साह रौनियारसहित नेता कार्यकर्ता माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन् ।
काठमाडौँस्थित माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड निवासमा पुगेर उनीहरू माओवादीमा प्रवेश गरेका हुन् । अध्यक्ष प्रचण्डले नव प्रवेशीहरुलाई टीका र माला लगाएर पार्टी प्रवेश गराई स्वागत गरेका थिए ।
क्षेत्रीय अध्यक्ष रामाकान्त चौरसिया द्वन्द्वकालमा रौतहट क्षेत्र ३ स्थित माओवादीको एरिया कमान्डर रहेर लामो समय काम गरेका थिए । अर्ली इलेक्सनको चर्चा चलेसँगै पछिल्लो समय एउटा पार्टी परित्याग गरी अर्को पार्टी प्रवेश गर्नेहरु बढेका छन् ।